ယခု ၀ ယ်ယူရန်ရရှိနိုင်သော LEGO Creator အစုံသစ်များကိုအမျိုးစုံရွေးချယ်ခြင်း
01 / 01 / 2021 31 / 12 / 2020 အာဒံ Basch 1381 Views စာ0မှတ်ချက် 31111 ဆိုက်ဘာမောင်းသူမဲ့လေယာဉ်, 31112 တောရိုင်းခြင်္သေ့, 31113 လူမျိုးကား Transporter, ၃၁၁၁၄ Superbike, 31118 Surfer သဲသောင်ပြင်အိမ်, 40468 အဝါရောင်တက္ကစီ, ၄၀၄၆၉ Tuk Tuk, Lego, Lego ဖန်တီးသူ
ခြင်္သေ့၊ surfer၊ စက်ရုပ်၊ tuk-tuk: အသစ်သောပေါင်းစပ်လိုက်သောသဟဇာတဖြစ်ပုံရသောစကားလုံးလေးလုံး Lego ဖန်ဆင်းရှင်အကွာအဝေး။
သင်နှင့်အနီးဆုံးတွင်အဓိကငွေသားဖြင့်ထည့်ပြီးနှစ်သစ်တွင်မြည်ရန်အဆင်သင့်ပြင်ပါ Lego စတိုး သို့မဟုတ်မှာ LEGO.com။ ဇန်နဝါရီလ 1, များစွာ၏လွှတ်ပေးရန်ခြေတစ်လှမ်းရခဲ့သည် အသစ်အစုံ တစ်များပြားလှသောဖြတ်ပြီး Lego ခေါင်းစဉ်များ Lego Creator ၏အခင်းအကျင်းသည်မတူကွဲပြားသောပေါင်း ၇ မျိုးကိုရရှိခဲ့သည် အသစ်အစုံ.
အသစ်သောအကွာအဝေး၏တစ် ဦး ကမီးမောင်းထိုးပြ roarsome ဖြစ်ပါတယ် 31112 တောရိုင်းခြင်္သေ့။ တည်ဆောက်နိုင်သောအသားစားသည်လှပသောလည်ဆံနှင့်အံသွားနှင့်ပြည့်စုံပြီးအချောသတ်ပုံစံသည်အပြည့်အဝတည်ရှိသည်။ 3-in-1 အစုတစ်ခုအနေဖြင့်တည်ဆောက်မှုသည်မုဆိုးမှငှက်ကုလားအုတ်သို့ပြောင်းပြီးငှက်ကုလားအုတ်သို့ပြောင်းနိုင်သည်။arthog ။ တစ်အုပ်ချင်းစီတွင်အုတ်ဖြင့်တည်ဆောက်ထားသောလင်းတသည်သဘာဝလမ်းစဉ်အတိုင်းလိုက်လျှောက်ရန်စိတ်ရှည်စွာစောင့်ဆိုင်းသည်။
အသစ်ဖြန့်ချိ၏အပြည့်အဝဌန် Lego Creator အစုံများကိုအောက်ပါလင့်ခ်များမှကြည့်နိုင်သည်။
သားရိုင်းတိရိစ္ဆာန်ဆောင်ပုဒ်ကိုနောင်တွင်ဆက်သွားမည် Lego ဖန်ဆင်းရှင်အစုံ နောက်ဆက်တွဲ 31116 Safari ကတောရိုင်းတိရစ္ဆာန်အိမ် အစုံပြီးသားဖြစ်ခဲ့သည် မတ်လဖြန့်ချိဘို့ထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့သည်။ ဤအစုံသည်ဖန်ဆင်းရှင်အားသစ်ကုလားအုတ်များထဲသို့ပေါင်းထည့်ပေးလိမ့်မည်။ 31115 အာကာသသတ္တုတွင်း Mechတစ်ချိန်တည်းမှာပင် ၂၀၂၀ ပြည့်လွန်နှစ်များကိုဆက်လက်အကောင်အထည်ဖော်သွားမည်ဖြစ်သည် 31107 အာကာသ Rover Explorer ကို.
ထွက်စစ်ဆေးရန်မမေ့ပါနှင့် အားလုံးအသစ်ကဇန်နဝါရီလ 1 လွှတ်ပေးရန်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မာစတာစာရင်း အားလုံးအနှံ့ Lego themes များ။